निर्धन उत्थान लघुवित्तले ४० करोड ४१ लाख नाफा कमायो - Aarthiknews
निर्धन उत्थान लघुवित्तले ४० करोड ४१ लाख नाफा कमायो
काठमाडौं । चालू आवको छ महिना(दोस्रो त्रैमास) मा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले रू. ४० करोड ४१ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा २१ प्रतिशले वृद्धि भएको हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. ३३ करोड ३२ लाख नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीले यस वर्ष शेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस शेयर र १५ दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको हो । चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ५० करोड छ । रिर्जभ कोषमा रू. १ अर्ब ५१ करोड छुट्याएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. १२ अर्ब ३२ करोड निक्षेप संकलन भएको छ भने रू. २० अर्ब ५० करोड कर्जा प्रवाह गरेको हो । सोही अवधिमा कम्पनीले रू. ९० करोड २१ लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
यो आम्दानी गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रतिशेयर आम्दानी ( वार्षिक) रू. ५३ दशमलव ८९, मूल्य आम्दानी अनुपात १६ दशमलव ७७, तरलता अनुपात १६ दशमलव ४२ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २०० दशमलव ६७ छ । कम्पनीले देशका ७७ वटै जिल्लामा १८१ शाखा कार्यालयहरु मार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।